Rem Bk – Page2– BIG FM 101.2 MHz
Home » Rem Bk (page 2)
ट्राफिकको भवन निर्माणका लागि पार्टी प्यालेस व्यवसायीको सहयोग
Rem Bk स्थानीय
बिग न्यूज पोखरा, १६ कात्तिक । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको निर्माणाधिन भवनका लागि गण्डकी अञ्चल पार्टी प्यालेस व्यवसायी महासंघले आर्थिक सहयोग गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच महासंघले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कास्कीलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । महासंघले निर्माणाधिन भवनका लागि ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको हो । महासंघका लागि केन्द्रीय अध्यक्ष लिला जिसी, गण्डकी शाखाका सल्लाहकार …
रेम बिक पोखरा, ११ कात्तिक । विवेकशील साझा पार्टीका सँयोजक रवीन्द्र मिश्रले अहिलेको सरकारले जनतामा घोर निराशाको प्रवाह गरेको बताएका छन् । साझा विवेकशील पार्टीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मिश्रले यति शक्तिशाली सरकारले यस्तो व्यवहार देखाउनु विडम्वना भएको प्रतिक्रिया दिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मिश्रले पुरै अधिकारसम्पन्न सरकार हुँदा पनि अरुलाई दोष दिएर आफुहरुले केहि गर्न नसकेको …
लेकसाइड मात्र होइन पर्यटकीय क्षेत्र : महेश भण्डारी
रेम बिक पोखरा, ११ कात्तिक । नवनियुक्त विवेकशील साझा पार्टीका गण्डकी सँयोजक महेश भण्डारीले संगठन विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सँयोजक घोषणा भएसँगै विवेकशील साझाले राखेको पत्रकार भेटघाटको क्रममा उनले आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका हुन् । जिल्ला, नगर हुँदै स्थानियस्तरसम्मको संगठन निर्माणका लागि आफू अबका दिनमा खटिने उनले बताए । ‘भर्खरै मात्र नेतृत्वमा आएकोले …
बिग न्यूज पोखरा, ९ कात्तिक । देशव्यापी संगठन विस्तारको कार्यक्रम अन्तरगत विवेकशील साझा पार्टीले पोखरामा प्रदेशस्तरिय प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ । शुक्रबार पोखरामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरुको उपस्थिती रह्यो । संगठन विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीको सँयोजकद्वय रविन्द्र मिश्र र उज्जवल थापासँगै केन्द्रीय नेताहरु डा. सूर्यराज आचार्य, केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा …
पोखरामा विवेकशील साझाको संगठन विस्तार तथा प्रदेश सँयोजक घोषणा कार्यक्रम
बिग न्यूज पोखरा, ८ कात्तिक । पोखरामा विवेकशील साझा पार्टीको संगठन विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने भएको छ । विवेकशील साझाको देशव्यापी संगठन विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत पोखरामा जिल्ला कमिटिको सँयोजनमा प्रदेशस्तरिय यो कार्यक्रम हुन लागेको हो । कात्तिक ९ र १० गते हुन लागेको कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको विवेकशील साझा पार्टी जिल्ला कमिटि कास्कीले जनाएको छ । यो कार्यक्रमका …
Rem Bk खेलकुद, मनोरञ्जन
रेम बिक पोखरा, २८ असोज । ‘एक्रो प्यारापाइलट’ सुवास थापाको बारेमा निर्माण गरिएको डकुमेन्ट्री ‘सुवास द एक्रो पाइलट’ आइतबार पोखरामा प्रदर्शन भएको छ । अर्जुन बरालको निर्देशनमा बनेको डकुमेन्ट्री पोखरा मिडटाउन सिनेमाजमा प्रदर्शन भएको थियो । डकुमेन्ट्रीलाई दर्शकले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिएका थिए । अन्तराष्ट्रियस्तरमा ख्याती कमाएका ‘एक्रो पाइलट’ थापाको प्याराग्लाइडिङ यात्रालाई डकुमेन्ट्रीले समेटेको छ । २० वर्षको उमेरबाट प्याराग्लाइडिङ …
दशैँखर्च कटाएर राइनासको सेवाश्रमका वृद्धवृद्धालाई खाद्यान्न
बिग न्यूज पोखरा, २८ असोज । लमजुङ ८ राइनास हर्राबोटस्थित सर्वोदय सेवाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरुलाई पोखराका केहि सामाजिक सेवामा आबद्ध रहेका युवाहरुको समूहले खाद्यान्न सहित लत्ताकपडा वितरण गरेका छन् । पोखराबाट हर्राबोटसम्म पुगेर १० जना युवाहरुको समूहले व्यक्तिगत रुपमा खर्च संकलन गरेर सहयोग उपलब्ध गराएका हुन् । दशैँको मौका पारेर उनीहरुले वृद्धवृद्धाहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराएको बताएका छन् । ‘घरभन्दा टाढा आश्रममा …
फेवातालमा ‘पौडी म्याराथन’!
Rem Bk खेलकुद, स्थानीय
रेम बिक पोखरा, २४ असोज । पोखराको फेवातालमा ‘पौडी म्याराथन’ हुने भएको छ । नेपाल पौडी संघ र कास्की जिल्ला पौडी संघको आयोजनामा आठौँ सँस्करणको खुला पौडी प्रतियोगिता हुन लागेको हो । जसलाई आयोजकले ‘पौडी म्याराथन’को नाम दिएका छन् । आयोजक पौडी संघले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिएको हो । यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने पौडीबाजहरुले …
पोखरामा ‘बुधबारेमा फ्लप मंगलबारेमा हिट’
बिग न्यूज पोखरा, १५ असोज । पोखरामा नाटक ‘बुधबारेमा फ्लप, मंगलबारेमा हिट’ मञ्चन हुने भएको छ । पोखरा थिएटरद्वारा संचालित ‘गन्धर्व नाटकघर’मा असोज १७ र १८ गते दुई दिन मात्रै यो नाटक मञ्चन हुनेछ । वन वल्ड थिएटरको प्रस्तुतीमा निर्माण गरिएको यो नाटक ‘बार्षिक नाट्य यात्रा २०७५’ अन्र्तगत पोखरा थिएटरमा मञ्चन हुन लागेको हो । स्थानियस्तरमा पोखरा थिएटरले यो नाटकको …